I-High Bonding Vacuum Ceramic Metallization Isibhamu China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > I-High Bonding Vacuum Ceramic Metallization Isibhamu
Ukuhlanza i-metallicisation bushing yenziwe nge 95%, 99% noma i-beryllium oxides, enefomula ekhethekile. Ukuze uhlangabezane nesidingo se-ceramic ezidingekayo zensimbi, ukumbozwa kwensimbi endaweni ethile ye-britamic bushing kuyadingeka.
Siyakwazi ukuhlinzeka ngamathuluzi e-ceramic ekhonjiwe ngokucophelela ngezindlela ezihlukahlukene zokugaya, ukuchithwa kwe-CNC, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana okungcono kakhulu kungaba +/- 0.001 ngobude, +/- 0.01 ububanzi obungaphakathi nangaphandle . Sibhekana nokuhleleka kokukhiqiza okuningi ngokushelela kahle ngenxa yendawo yethu yokukhiqiza ephelele ngaphakathi.
Ama-ceamics ensimbi ahlobene